Imikhwa engama-20 eya kukwenza ube ngumyili ophumeleleyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UMelisa Perrotta | | Abadlali, Idizayini yeMifanekiso, Ukuphefumlelwa
Zininzi izizathu zokuba kutheni abayili okanye omnye umntu umntu uphumelele emsebenzini wakhe. Ezi zizathu ngokubanzi zihambelana neyakho ukusebenza kunye noluhlu lwemikhwa efunyenwe ngabantu abanjalo kubomi babo bonke obanceda ukuba balinganise ukusebenza kwabo kwaye bacwangcise indlela yokuyiphucula.
Ngelixa kungekho ndlela yokuphumelela, zininzi izinto esinokuzenza ukuphucula ukusebenza kwethu Nazi ezinye zazo ukuze ubamkele kwinkqubo yakho yesiqhelo.
1 Yiba nomdla
2 Gxeka owakho umsebenzi
3 Bacele ukuba bagxeke umsebenzi wakho
4 Sukuvumela ukuba bakubeke phantsi kwamaxesha angenakufikeleleka okuhanjiswa
5 Khangela ukukhuthazwa kuyo yonke into
6 Funda ukuziqhelelanisa ukuze ubuye nomfutho ongaphezulu
7 Fumana eyona nto uyenzayo
8 Mamelani nibukele
9 Ziqhelanise, ziqhelanise kwaye uziqhelanise
10 Ukuphucula ukubekwa phambili kokubaluleka kwakho
11 Hlala usesikhathini kunye neendlela
12 Yiya ngaphaya kwento ekufuneka uyenzile
13 Funda ukusebenza phantsi koxinzelelo
14 Ukuphuhlisa amandla okwenza imisebenzi emininzi
15 Gcina inkqubo elungileyo yombutho
17 Lazi ishishini lakho
18 Yiba ligunya
19 Landa abathengi bakho
20 Xa uvukile, thumela ilifti ezantsi
Eyona ibalulekile kwikhondo loyilo ngumnqweno. Olu shishino lubetha ngamandla olufuna umdla rhoqo kunye nokuzinikela. Umyili akunakukhula kwaye abe ngoyena ulungileyo ukuba akakhuthazeki kwaye akafumani umsebenzi wakhe unomtsalane.
Gxeka owakho umsebenzi
Kubalulekile ukuba abayili babe ne umthamo wovavanyo lokuzihlola rhoqo kunye nokugxeka. Akwanelanga ukonwaba ngeprojekthi, kuyimfuneko ukuba ubange kwaye uhlale ucinga ukuba ngewenze ngcono. Ekuhambeni kwexesha le Imfuno iya kuba kukugqwesa.
Bacele ukuba bagxeke umsebenzi wakho
Iibini ezimbini zamehlo zingcono kunenye, yiyo loo nto kusoloko kunjalo funa izimvo zabanye abantu. Zama ukukhetha kwaye ungangeni kumdlalo wokungcamla, kuba oku kufuna ukugxekwa abantu obathandayo kwaye ube nenjongo yokuhlalutya ukuba kutheni lo mntu ecinga ngolu hlobo.
Sukuvumela ukuba bakubeke phantsi kwamaxesha angenakufikeleleka okuhanjiswa
Buza ukuba ngowuphi owona mhla wokuhanjiswa kweprojekthi. Sukuvumela abanye abantu babeke uluhlu lwakho oluphambili ngokuxoka malunga nexesha elibekiweyo. Buza abathengi bakho ngeshedyuli yeprojekthi ekunceda ukuba uqonde ukuba kutheni bekhethe lo mhla. Nangona kunjalo, gcina engqondweni amaxesha amisiweyo eprojekthi nganye. Ezi zibalulekile kwimveliso, kuba zisinceda ukuba sisebenze ngokufanelekileyo kwiprojekthi egxile kuyo yonke ingqalelo yethu kwaye siqhubeke nenye.
Khangela ukukhuthazwa kuyo yonke into
Ihlabathi liyakhuthaza kwaye umdali ulifunxa ihlabathi kwaye uyitolike kwakhona. Yile nto ayenzayo umyili ophumeleleyo. Uyayazi indlela yokuthatha iziqwengana zezinto kwaye uzibuyisele kunye kwinto eza kusebenza kunye / okanye ngobuchule enomtsalane.
Funda ukuziqhelelanisa ukuze ubuye nomfutho ongaphezulu
Kuyimpazamo ukucinga ukuba kufuneka sinikele nge-100% yexesha lethu lokusebenza ukuze siphumelele. Ujongene nokugcwala, kubalulekile ukwazi ukuba ungathatha nini umzuzwana, uhambe kwaye ucace. Kwezi meko, kulungile ukwenza imisebenzi yomzimba, ukuhamba okanye ukuthatha iiklasi zokudanisa umzekelo.
Fumana eyona nto uyenzayo
Ngamanye amazwi fumana indawo yakho kwaye uphuhlise apho ngamandla amakhulu. Nje ukuba ukwazi ukungena kwimarike kwaye uzenzele umsebenzi othile, ungathatha imiceli mngeni emitsha. Kodwa okokuqala kugcina engqondweni ayibobuninzi kodwa ngumgangatho.
Kuya kufuneka uphuhlise izakhono zokumamela. Oku kubalulekile ukuze ufunde indlela umthengi acinga ngayo kodwa ngaphezulu kwayo yonke loo nto kuyanceda ukuba uvelane nomsebenzisi wemveliso yakho kwaye uqonde ukuba kutheni kubalulekile ukuba imveliso ibenazo okanye ezo mpawu.
Ziqhelanise, ziqhelanise kwaye uziqhelanise
Le yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kumyili. Ekuphela kwendlela esinokuthi silunge ngayo ngokwenene yinto kukuziqhelanisa rhoqo okusikhokelela ekubeni sifunde ukuba yintoni iindlela ezifanelekileyo zokwenza umsebenzi.
Ukuphucula ukubekwa phambili kokubaluleka kwakho
Qonda ukuba ngubani okanye yintoni efuna ingqalelo yakho ekufutshane okanye ekufutshane. Kuphela kungokubekwa phambili ngokubaluleka apho uya kuthi ukwazi ukuhlangabezana namaxesha angqongqo okuhambisa ngendlela efanelekileyo kwaye ke ubenakho ukubonelela nge- inkonzo eyeyakho.
Hlala usesikhathini kunye neendlela
Uyilo ishishini elichongwe ziindlela Kungenxa yoko le nto kufuneka sihlale siziqonda izinto ezichaphazela iimarike ezahlukeneyo esisebenza kuzo. Oku kuyakumisela ukuthandwa nokwamkelwa imveliso yethu iya kuba nayo kuluntu ngokubanzi.
Yiya ngaphaya kwento ekufuneka uyenzile
Oku kulula kakhulu ukuba bakucela i-100%, unika i-200%. Ngaloo ndlela Uya kubonisa umthengi ukuzibophelela kwakho kwiprojekthi kwaye uya kuba nethuba elingcono lokuba akhethe ukusebenza nawe kwakhona. Kwelinye icala, kuya kukunceda ukuba unconywe ngokugqwesa owenza umsebenzi wakho.
Funda ukusebenza phantsi koxinzelelo
Olu shishino lujolise kwinjongo. Ngesi sizathu, uninzi lweeprojekthi baya kufuna inxaxheba ebonakalayo kwinxalenye yomyili. Kuyimfuneko ukuba ukuhanjiswa kuzalisekiswe ngemihla esikiweyo okoko umsebenzi wethu ulikhonkco eliza kuchaphazela yonke imveliso kwaye inokulimaza umthengi.
Ukuphuhlisa amandla okwenza imisebenzi emininzi
Ukuba ucinga ukuba ungaphumelela ukuphuhlisa iprojekthi ngaxeshanye, uphosakele kakhulu. Abaqulunqi abasebenza kwiiarhente eziphambili ngokubanzi baneeprojekthi ezi-5 ukuya kwezi-10 ngokubaluleka okwahlukileyo ababelwe zona bodwa. Ukuba ufuna ukungena kwiligi ezinkulu kuya kufuneka unokwazi ukujongana neemfuno zabathengi abaninzi, ngokukhawuleza.
Gcina inkqubo elungileyo yombutho
Ukuze ukwazi ukusebenza ngokuzimeleyo kwaye ukwazi ukukhokela iiprojekthi ezininzi ngaxeshanye ukuba ngumphathi woyilo olukhulu kubalulekile. Kungenxa yoko le nto kufuneka ukuba kucace malunga nokucwangciswa kunye neshedyuli yazo zonke iiprojekthi ukwenza imisebenzi ngemihla emiselweyo. Ukwenza oku ungasebenzisa izixhobo ezinje nge Trello o Wunderlist.
Kubaluleke kakhulu ukuba umyili abe nako ukubandakanyeka ubudlelwane nabantu abavela kwimisebenzi eyahlukeneyo kunye namashishini. Ngalo lonke ixesha khumbula ukuphatha ikhadi lakho leshishini kuyo yonke indawo kwaye unomdla wokwakha uluhlu loqhakamshelwano oluqulathe oosomashishini, amagcisa, ootitshala nabantu osebenza nabo.
Lazi ishishini lakho
Akukho mntu ufanele alazi ishishini lakho ngcono kunawe. Ulwazi luya kukunika izibonelelo zokukhuphisana ngaphezu koogxa bakho. Kungenxa yoko le nto kufuneka uzame ukwazi kangangoko unako malunga nayo yonke into enxulumene nomsebenzi wakho. Ikhosi onokuyenza, uyayenza; umboniso wobugcisa onokuya kuwo, uya khona; incwadi ephumayo, uyifundile; Inkqubo yoyilo ebonakalayo, ufunda ukuyisebenzisa.
Abantu bafuna umntu oza kumlandela, ke yibani. Akukho nto yanelisa umyili ngaphezu kokwazi ukuba yintoni umntu okhuthazayo kwabanye.
Landa abathengi bakho
Akwanelanga ukwenza nje iprojekthi kodwa kunye Ulandelo olulandelayo lokuvavanya iziphumo Iprojekthi ibinayo kumbutho. Ke, ukusukela koku, ukuphuculwa kwexesha elizayo kunokuqikelelwa kwaye kugqitywe ukuba zeziphi wenza iimpazamo ukungaziphindi kwakhona.
Xa uvukile, thumela ilifti ezantsi
Kodwa ngaphezulu kwayo yonke into oyenzayo, wakube ukwazi ukuba ngumyili ophumeleleyo Qiniseka ukuba unceda kangangoko bakuncedileyo. Kufanelekile ukuvumela abanye abantu ukuba babenamathuba umntu anakho kwaye angaze alibale ukuba lowo wayekule ndawo kwaye wayefuna isandla. Singaqhubeka nokukhula kuphela ukuba sinombulelo kunye nomanyano.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Imikhwa engama-20 eya kukwenza ube ngumyili ophumeleleyo